The Voice Myanmar အစီအစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံး Winner ကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဆိုတာ
The Voice Myanmar အစီအစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံး Winner ကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ
1 Jun 2018 . 6:01 PM
The Voice Myanmar ရဲ့ပထမဆုံး Winner ကဘယ်သူများဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စရာပါပဲ။နောက်ဆုံး Final မှာ အမျိုးသားအဆိုရှင်သုံးဦးဖြစ်တဲ့ ငွေစိုး၊သော်ဒီနဲ့Mark Jason အမျိုးသမီးအဆိုရှင်ကတော့ နှင်းအိနြေ္ဒရှင်တစ်ဦးထဲသာကျန်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးယောက်ထဲ Winner တစ်ယောက်ပရိသတ်ကြီးဆိုရင်ရောဘယ်သူ့ကိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲ?
ငွေစိုးဟာ မန္တလေးကနေလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အဆိုဝါသနာရှင်တစ်ဦး အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး Mood အပြည့်နဲ့သီချင်းတွေကိုသီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နည်းပြဖြစ်သူအဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့အဖွဲ့ကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဆိုရင် သူ့ရဲ့အသံဟာအဆိုတော်ဘိုဘိုနဲ့တူတယ်လို့ နည်းပြတွေကသုံးသပ်ကြပြီး အခြားအဖွဲ့မှနည်းပြဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော်ကကိုငွေစိုး ကို တစ်ယောက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်။ရှေ့ဆက်မယ့် အနုပညာလျှောက်လမ်းမှာ ငွေစိုးဆိုတာကိုယ့်စတိုင်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ်ရှိစေချင်တယ်လို့သုံးသပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
သော်ဒီကတော့ နည်းပြရန်ရန်ချန်းရဲ့ အဖွဲ့ကနေ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သော်ဒီဟာသီချင်းတွေ သီဆိုတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ သူဆိုသွားတဲ့ထဲက အမိန့်ဆိုတဲ့သီချင်းဟာ သီဆိုရခက်ခဲတဲ့သီချင်းမျိုးဖြစ်ပေမယ့်လည်း အသံပါဝါကောင်းကောင်း နဲ့ပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်လောက်အောင်ကို သီဆိုနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ သော်ဒီဟာတဖွဲ့ထဲဖြစ်တဲ့ ခိုင်မြဲသစ္စာနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာကျန်ရှိခဲ့တဲ့ သူဖြစ်လို့ နည်းပြရန်ရန်ချန်းအဖွဲ့က အဆိုရှင်သော်ဒီကိုလည်း လျှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။
Mark Jason ဟာ ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာကတည်းကအင်္ဂလိပ်သီချင်း တွေကိုပဲသီဆိုခဲ့တဲ့သူဖြစ် လို့မြန်မာသီချင်းတွေဆိုရင် အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီးထင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်သီဆိုခဲ့တဲ့ အချစ်ဆုံး လို့အမည်ရတဲ့သီချင်းကိုပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုပြခဲ့ကာ ပရိသတ်ကိုအားရကျေနပ်စေခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းပြနီနီခင်ဇော်ရဲ့ အဖွဲ့မှနောက်ဆုံးကျန်ရှိသူ Mark Jason ဟာလည်းတကယ့်ကို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုရှင်နှင်းအိနြေ္ဒရှင်ကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မစိမ်းတဲ့ အဆိုရှင်မလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ The Voice Myanmar ကိုမဝင်ပြိုင်ခင်ကတည်းကသူမအနေနဲ့ Cover Song တွေကိုသီဆိုတတ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ The Voice Myanmar ကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာတော့ Opera သီချင်းနဲ့ ရင်ကိုဖွင့်ပြီး Mood ပါပါသီဆိုဟန်ကြောင့် နည်းပြလုပ်တဲ့သူလေးယောက်လုံးလှည့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ အဆိုရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှနည်းပြ ကျားပေါက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အဆိုရှင်နှင်းအိနြေ္ဒရှင်ဟာ အခုဆိုရင် ကျားပေါက်ရဲ့ အဖွဲ့မှာ နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
The Voice Myanmar ရဲ့  နောက်ဆုံး Winner ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့ မှာသိရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကို Winner ဖြစ်စေချင်သလဲဆိုတာ Comment မှာဖြေပေးခဲ့ကြဦးနော်……
Photo Credit:The Voice Myanmar Facebook Page
The Voice Myanmar အစီအစဉျရဲ့ပထမဆုံး Winner ကဘယျသူဖွဈမှာလဲ
The Voice Myanmar ရဲ့ပထမဆုံး Winner ကဘယျသူမြားဖွဈမလဲဆိုတာကတော့ရငျခုနျစရာပါပဲ။နောကျဆုံး Final မှာ အမြိုးသားအဆိုရှငျသုံးဦးဖွဈတဲ့ ငှစေိုး၊သျောဒီနဲ့Mark Jason အမြိုးသမီးအဆိုရှငျကတော့ နှငျးအိန်ဒွရှေငျတဈဦးထဲသာကနျြရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒီလေးယောကျထဲ Winner တဈယောကျပရိသတျကွီးဆိုရငျရောဘယျသူ့ကိုဖွဈစခေငျြပါသလဲ?
ငှစေိုးဟာ မန်တလေးကနလောရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ အဆိုဝါသနာရှငျတဈဦး အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ ပရိသတျကိုဆှဲဆောငျနိုငျပွီး Mood အပွညျ့နဲ့သီခငျြးတှကေိုသီဆိုတတျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာ နညျးပွဖွဈသူအဆိုတျောလငျးလငျးရဲ့အဖှဲ့ကနနေောကျဆုံးကနျြရှိသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
သီခငျြးဆိုရငျ သူ့ရဲ့အသံဟာအဆိုတျောဘိုဘိုနဲ့တူတယျလို့ နညျးပွတှကေသုံးသပျကွပွီး အခွားအဖှဲ့မှနညျးပွဖွဈတဲ့ နီနီခငျဇျောကကိုငှစေိုး ကို တဈယောကျပဲဖွဈစခေငျြတယျ။ရှဆေ့ကျမယျ့ အနုပညာလြှောကျလမျးမှာ ငှစေိုးဆိုတာကိုယျ့စတိုငျနဲ့ကိုယျ၊ ကိုယျ့ဟနျနဲ့ကိုယျရှိစခေငျြတယျလို့သုံးသပျပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။
သျောဒီကတော့ နညျးပွရနျရနျခနျြးရဲ့ အဖှဲ့ကနေ နောကျဆုံးကနျြတဲ့ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။သျောဒီဟာသီခငျြးတှေ သီဆိုတဲ့အခါမှာ ကိုယျပိုငျဟနျ၊ ကိုယျပိုငျပုံစံတဈခုကို ဖနျတီးနိုငျတာတှရေ့ပါတယျ။ သူဆိုသှားတဲ့ထဲက အမိနျ့ဆိုတဲ့သီခငျြးဟာ သီဆိုရခကျခဲတဲ့သီခငျြးမြိုးဖွဈပမေယျ့လညျး အသံပါဝါကောငျးကောငျး နဲ့ပရိသတျကွိုကျနှဈသကျလောကျအောငျကို သီဆိုနိုငျတာတှရေ့ပါတယျ။ သျောဒီဟာတဖှဲ့ထဲဖွဈတဲ့ ခိုငျမွဲသစ်စာနဲ့ယှဉျပွိုငျခဲ့ရာမှာကနျြရှိခဲ့တဲ့ သူဖွဈလို့ နညျးပွရနျရနျခနျြးအဖှဲ့က အဆိုရှငျသျောဒီကိုလညျး လြှော့တှကျလို့တော့မရပါဘူး။
Mark Jason ဟာ ပွိုငျပှဲကိုစတငျဝငျရောကျလာကတညျးကအင်ျဂလိပျသီခငျြး တှကေိုပဲသီဆိုခဲ့တဲ့သူဖွဈ လို့မွနျမာသီခငျြးတှဆေိုရငျ အဆငျပွပေါ့မလားဆိုပွီးထငျမွငျခဲ့ပမေယျ့လညျး အဆိုတျောထူးအိမျသငျသီဆိုခဲ့တဲ့ အခဈြဆုံး လို့အမညျရတဲ့သီခငျြးကိုပိုငျနိုငျစှာ သီဆိုပွခဲ့ကာ ပရိသတျကိုအားရကနြေပျစခေဲ့သူတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့နညျးပွနီနီခငျဇျောရဲ့ အဖှဲ့မှနောကျဆုံးကနျြရှိသူ Mark Jason ဟာလညျးတကယျ့ကို အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ယှဉျပွိုငျသူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုရှငျနှငျးအိန်ဒွရှေငျကတော့ ပရိသတျတှနေဲ့လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ မစိမျးတဲ့ အဆိုရှငျမလေးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ The Voice Myanmar ကိုမဝငျပွိုငျခငျကတညျးကသူမအနနေဲ့ Cover Song တှကေိုသီဆိုတတျသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ The Voice Myanmar ကိုစတငျယှဉျပွိုငျခဲ့ရာမှာတော့ Opera သီခငျြးနဲ့ ရငျကိုဖှငျ့ပွီး Mood ပါပါသီဆိုဟနျကွောငျ့ နညျးပွလုပျတဲ့သူလေးယောကျလုံးလှညျ့ကွညျ့ခဲ့ကွတဲ့ အဆိုရှငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီထဲကမှနညျးပွ ကြားပေါကျကိုရှေးခယျြခဲ့တဲ့ အဆိုရှငျနှငျးအိန်ဒွရှေငျဟာ အခုဆိုရငျ ကြားပေါကျရဲ့အဖှဲ့မှာ နောကျဆုံးကနျြရှိတဲ့သူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
The Voice Myanmar ရဲ့ နောကျဆုံး Winner ကဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာကိုအခုလာမယျ့ တနင်ျဂနှနေေ့ ဇှနျလ ၃ရကျနေ့ မှာသိရတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဘယျသူ့ကို Winner ဖွဈစခေငျြသလဲဆိုတာ Comment မှာဖွပေေးခဲ့ကွဦးနျော……